Khomba elingenalutho - Bhalobhasha yabadlali abaningi lokuqala umuntu, okuyinto eyaba impela yimpumelelo Cyber-isiyalo. Le phrojekthi yaqalwa ngo-2009 futhi emva kwesikhashana yanyatheliswa ngo-Russian by NCSoft. Lesi sihloko sichaza ngezidingo zesistimu Point Blank, kanye umlando kumiswa umdlalo njengoba eSports isiyalo.
Ngemva nje konyaka umdlalo emashalofini yesaziso yayo eSports abalandeli. Ngenxa ukuthandwa Bhalobhasha neyaziwayo ezemidlalo isiyalo. Kuleli qophelo embhalweni umdlalo kukhona amaqembu angaphezu kuka-10,000 ukuthi ukuncintisana ngokumelene nomunye tournaments ehlukahlukene. Point Blank akuyona iphrojekthi super ethandwa, ngakhoke izilaleli namachibi umklomelo mancane kakhulu kunalawo ku CS. Nokho, lokhu akuzange kuvimbele ukudalwa isondelene futhi banobungane umdlalo emphakathini.
Minyaka yonke kukhona World Cup kanye inqwaba tournaments ezincane. Izimfuneko zesistimu bekuvumela ukuba uyidlale Point Blank kumakhompyutha kancane, esiza ukuthutheleka abadlali abasha futhi zidonse ukunaka kwanoma emikhakheni ehlukene sabantu.
Emihle nemibi umdlalo
Omunye izinzuzo main of Point Blank - Dynamics. Ayikho enye Bhalobhasha (ngaphandle uma "Inombolo Of Duty") ngeke kuqhathaniswe nale game for lobubhalo. Kumephu ngesikhathi impi njalo zenzeka noma yisiphi isenzo, umsindo imishini akusho ukubohla yesibili, kanye nezinqubo ezathathwa abadlali ekuhambeni.
Izinzuzo futhi kufake tinhlobonhlobo izindlela. Ukuze ukusetshenziswa esemthethweni kuphela amageyimu ambalwa, kodwa abadlali ezikhululekile nendawo ukuze ujabule. Lapha uzothola evamile impi umyalo ithimba ukuzivikela futhi amaphuzu bamba, ngisho ukulwa ne izibankwakazi.
Kancane konakalisa umbono umdlalo abadlali ngokwabo, ngubani ifinyelela iseva. Njengoba izidingo simiso Point Blank yeningi ngokwanele ukusebenzisa umdlalo kukhompyutha iminyaka 6-7 edlule, izethameli ikhula osayizi enkulu kakhulu. Lokhu kuvimbela ukwakheka umphakathi eziningana, abaziqondayo futhi akwazi ukudlala Point Blank.
Kukhona kusimo is semali umnikelo. Izinto for imali yangempela, ukushintsha ukubukeka isikhali noma uhlamvu, ungakwazi uthuthukise ukusebenza zempi noma amandla ukulwa. Ngenxa yalokhu ibhalansi ukuhlupheka phakathi kwalamaqembu.
Izidingo zesistimu Khomba elingenalutho
Ukuqala umdlalo kwi ongaphakeme njengoba udinga ukucushwa elandelayo: processor "Intel Pentium 4" noma okulingana ngu "AMD", 512 MB RAM futhi 1 GB kanzima ukushayela ukufakwa. Futhi i-Point Blank ezincane zesistimu nezimfuneko kusikisela ukuba khona esitebeleni inthanethi.
Ukuze eliphezulu ihluzo ezidingekayo: 2-core 3 GHz, 1 GB RAM 256 MB ihluzo ikhadi.
Isikulufa motor downhole: izici, imigomo yokusetshenziswa idivayisi
Igama oda kanye division langempela lomusho. Lesi sigaba langempela umusho ngolimi lwesiNgisi
Pie ne amajikijolo, nge ithanga noma apula? Indlela ukubhaka wangempela apple pie.
Ukukhuluphala kwenhliziyo - isishayo sesimanjemanje!